Momba anay | Nenwell Refrigeration
NENWELL dia naorina tamin'ny 2007. Nandritra ny taona maro niasa mafy sy ny ezaka, dia efa nivoatra ho matihanina, azo itokisana mpanamboatra sy ny mpamatsy ny ara-barotra refrigeration vokatra toy ny mitsangana showcase, mofomamy showcase, gilasy showcase, tratra vata fampangatsiahana, mini-bar vata fampangatsiahana sns Ny mpanjifa dia afaka misafidy amin'ny lisitry ny vokatra, na afaka manamboatra araka ny teti-dratsy sy ny fepetra takian'ny mpanjifa. Manana ekipa injeniera ara-teknika sy mpiasa manana traikefa 10 taona amin'ny famolavolana sy ny famokarana izahay. Manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra ihany koa izahay mba hahazoana antoka fa ny ampahany rehetra amin'ny vokatray dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny kalitao avy amin'ny mpanjifa. Manome serivisy tsara aorian'ny varotra ihany koa izahay mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifanay raha misy fanontaniana na olana. Mifantoka amin'ny fitsapana kalitao, olana ara-pitaovana ary manome loharano mpamatsy / orinasa vaovao any Shina ho anao sy ny orinasanao izahay. Raha lazaina amin'ny teny iray dia afaka mitantana ny serivisy fanondranana manontolo ho an'ny mpanjifantsika isika. Ny orinasanay dia mikendry ny hanome ny mpiara-miasa aminay amin'ny serivisy tsara indrindra izay ahitana vokatra, kalitao, vidiny ary serivisy. Miorina amin'ny "Mitodika amin'ny olona, ​​manome serivisy sarobidy", ny foto-kevitra fototra sy ny fiaraha-miasa mifanohana, miankina & maharitra maharitra, ary koa ny hevitra momba ny serivisy fanavaozana tsy tapaka, dia hanome serivisy sarobidy kokoa ho an'ny tsena sy ny fiaraha-monina. Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy sy ny fanaon'ny mpiasa rehetra, ankehitriny dia manana andiana fomba fiasa sy rafi-piasana tsy misy dikany izahay mba hanomezana serivisy tsara kokoa ho an'ny mpiara-miasa sy ny mpanjifanay.
Ny tombony azonay:
Ny vokatra feno sy ny kalitao azo antoka
Toeram-pamokarana avo lenta
Ekipa QC matihanina
Fanohanana ara-teknika sy famatsiana piesy
Tandremo ny antsipiriany sy ny serivisy haingana
refrigeration vokatra Accessories
· Mandray anjara amina karazana fampirantiana matihanina iraisam-pirenena isan-taona. Izany dia mahatonga antsika ho matihanina kokoa sy ho saro-pady amin'ny fironana tsena. · Manome sy manoro hevitra ny mpanjifa bebe kokoa momba ny tsena sy ny fampandrosoana ny vokatra. · Manana fahafahana mamolavola vokatra vaovao miaraka amin'ny mpanjifa na mivoatra tsy miankina. · Mahazatra ny orinasa vahiny sy ao an-toerana ary ny rojo famatsiana. · Fahaiza-manao fitantanam-bola marina. Araho hatrany ny fiovan'ny tsena ara-materialy. Tantano ny fotoana tsara indrindra hividianana Ampio ny mpanjifa hitsitsy vola.
serivisy tsara kokoa
Amin'ny alàlan'ny ezaka mitohy sy ny fanaon'ny mpiasa rehetra, ankehitriny isika dia manana andiana fomba fiasa sy rafitra miasa mba hanomezana serivisy tsara kokoa ho an'ny mpiara-miasa sy ny mpanjifantsika.
Manana fahitana iraisam-pirenena malalaka sy saro-pady ny tsena, afaka mamolavola ny vokatra vaovao na namboarina miaraka amin'ny mpanjifa. Hialoha ny tsena, hahazoana anjara tsena bebe kokoa sy hahazo tombony miaraka amin'ny mpanjifa. Manome soso-kevitra momba ny fampandrosoana tsena mahomby foana ho an'ny mpanjifa samihafa, mamboly mpanjifa ny traikefan'ny vokatra fampangatsiahana, manampy ny mpanjifa haingana hibodo ny tsena!
Departemantan'ny serivisy mpanjifa
Ny traikefa tsara amin'ny asa sy ny ekipa matihanina dia manome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa. Afaka manome ny taham-pitaterana an-dranomasina sy an'habakabaka tsara indrindra, drafitra fanaterana ary soso-kevitra momba ny fividianana. Valiny haingana indrindra:Valiny haingana amin'ny fanontaniana rehetra mandritra ny famokarana baiko. Valiny haingana sy matihanina momba ny olana momba ny kalitao!
Departemantan'ny fitantanana kalitao
Nenwell dia manana ekipa fanaraha-maso kalitao matihanina. Jereo tsara ny famokarana rehetra. Hanao ny tatitra momba ny fisafoana ho an'ny mpanjifa izahay aorian'ny famokarana. Valiny haingana sy matihanina momba ny olana momba ny kalitao! Mety ho solontenan'ny mpanjifa any ivelany.Miara-miasa amin'ny orinasa hamolavola vokatra sy fanatsarana ny kalitao.
sampana varotra afrika atsinanana
Nandritra ny volana lasa teo, ny vidin'ny Foshan Nenwell Trading Co., Ltd. dia nahomby tamin'ny fametrahana modely ara-barotra matotra, ary nahazo ny fahaiza-manao hanome tolotra maharitra ho an'ny mpanjifantsika. Mba hitadiavana teboka fitomboana vaovao hanatsarana bebe kokoa ny ampahany amin'ny tsenan'ny marika, ny orinasanay dia mikaroka ny tsena any ivelany, vao haingana no nahavita nanangana sampana any Kenya, Afrika Atsinanana, mikendry ny hanome ny vokatra tsara indrindra amin'ny vidiny mifaninana ho an'ny mpanjifa eo an-toerana. .